हिमाल खबरपत्रिका | 'प्यारेन्टिङ' सिकाउने पुस्तक
'प्यारेन्टिङ' सिकाउने पुस्तक
पुस्तक हामी आमाबाबु लेखक गिजुभाई बधेका
पुनर्लेखन शरदचन्द्र वस्ती प्रकाशक सिकाइ
समुह पृष्ठ ११६+२०
हरेक आमाबाबुभित्र भविष्यमा आफ्ना सन्तान विशिष्ट पेशा–व्यवसायमा सफल बनून् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यसका लागि उत्सुक र अन्योलग्रस्त बालबालिकालाई तयार पार्ने शैली चाहिं कस्तो छ त? शिक्षाकर्मी र शिक्षा–संचारकर्मीहरूको संस्था 'सिकाइ समूह' ले हालसालै प्रकाशनमा ल्याएको किताब हामी आमाबाबु सबै आमाबाबुलाई आ–आफ्नो शैली बुझ्न र त्यसमा सुधार ल्याउन उत्प्रेरित गर्र्छ।
छोरा : आमा, म चिया पकाउँ?
छोरा : आमा म आफैं नुहाऊँ?
“बाबा, म दौडमा फर्स्ट भएँ, ई हेर्नुस् त ट्रफी!”
“पढ्नु गुन्नु क्यै छैन। पढाइमा फर्स्ट भए पो!”
“मम्मी, मैले सफाइमा पुरस्कार पाएँ, ई हेर्नुस् त!”
“पढ्नु गुन्नु क्यै छैन, नक्कल पार्न त जानेकी छस् नि।”
आमा : असिम सधैं फर्स्ट हुन्छ, तिमी उस्तै हुनुपर्छ छोरा!
“म किन ऊ जस्तो हुनु, ऊ म जस्तो छ र?”
बाबु : ठूलो भएर पुलिस अफिसर बन्नुपर्छ छोरा! कोहीसँग नडराउनु।
“बाबाले भनेर हुन्छ र? मलाई पुलिस मनै पर्दैन। म त डाक्टर बन्छु।”
हामी आमाबाबु बाट उद्धृत यी संवादहरूमा आम आमाबाबुले आफ्नो दैनिक बोली–व्यवहार र छोरीछोरीको प्रतिकार पाउँछन्। अन्योल, अवमूल्यन, प्रकारान्तर, प्रतिबिम्ब, परिणाम, शिक्षा र समझदारी गरी सात खण्डको किताब यस्ता उदाहरणले भरिएका छन्, जसले सन्तानको भविष्यको लागि चिन्तित बाबुआमाका गलत व्यवहारको पोल खोल्छन् र हुर्कंदा छोराछोरीलाई सही सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने सामान्यतः नसोचिएको सरल काइदा सुझाउँछन्। पुस्तकको हरेक खण्डले बाबुआमामा हत्तेरिका, ए हो त नि, ज्या भन्ने भाव जगाउँछ र आँखा खुल्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।
पुस्तकका मूल लेखक सन् १८८५ मा गुजरात (भारत) मा जन्मेका शिक्षाशास्त्री गिजुभाई बधेका हुन्। उनको हिन्दीमा अनूदित कृति माँ बापों की माथापच्ची को पुनर्लेखन गरेर शरदचन्द्र वस्तीले हामी आमाबाबु तयार पारेका हुन्। वस्तीको नेपालीकरणले डेढ शताब्दीअघि गुजराती परिवेशमा बाबुआमाको लागि लेखिएको किताबलाई मौलिक कृति जस्तो बनाएको छ, जसमा बालबालिकाप्रति अपार विश्वास र सम्मानभाव छ। यी भाव निसन्देह रुपमा गिजुभाईकै हुन्।
नेपाली बजारमा ठूलो मान्छे बन्न बालबालिकाले पढ्नुपर्ने पुस्तकको कुनै कमी छैन। बालबालिकालाई कसरी पढाउने भनेर शिक्षक–शिक्षिकालाई सिकाउने पुस्तकहरू पनि मनग्य पाइन्छ, तर स्वभावैले जिज्ञासु आफ्ना छोराछोरीको उमेरगत अन्योललाई कसरी ज्ञान–अनुभवले विस्थापित गर्दै हुर्काउने भनेर सिकाउने किताब भने संभवतः यो नै पहिलो होला, 'एडापटेशन' नै भए पनि।
सामान्यतः हामी सबै बाबुआमा आफ्ना छोराछोरीका लागि राम्रै हुन्छौं। असल बाबुआमा बन्न चाहिं यो किताबले सिकाउँछ, त्यो पनि अर्ति–उपदेश दिएर होइन, दैनन्दिनका अनेक प्रसंग र उदाहरणबाट। बालबालिकाबीच अनायास भएको एकछिनको झगडालाई लिएर छिमेकीसँग मनमुटावदेखि मारामारीसम्ममा ओर्लेका वा ओर्लन नहिच्किचाउने अनि घरमा चाहिं माया वा हितचिन्ताको नाममा छोराछोरीमाथि आफ्नो इच्छा लाद्ने हामी बाबुआमालाई पुस्तकको लाइन–लाइनले जिल्याउँछ। भइसकेका बाबुआमा र हुनेवाला बाबुआमादेखि शिक्षक–शिक्षिकासम्मले पढ्नैपर्ने पुस्तक ल्याएको छ, सिकाइ समूहले